Yakamuka Simba kupa 20MW ye500W ma module kuMalaysia-yakavakirwa Tokai Injiniya, inomiririra yekutanga nyika odha yemamodhi ane simba
Risen Energy Co., Ltd. munguva pfupi yapfuura yakaisa chibvumirano chekudyidzana ne Shah Alam, Malaysia-based Tokai Engineering (M) Sdn. Bhd. Pasi pesungano, iyo Chinese femu ichapa 20MW yeepamusoro-anoshanda Solar PV module kune iyo Malaysian femu. Inomiririra yekutanga kurongeka kwenyika kwema500W ma module uye mumwe muenzaniso weRisen Energy hutungamiriri munguva yePV 5.0.
Nemakore makumi maviri neshanu ezviitiko, Tokai ave akagadzwa wezuva mhinduro investor semhedzisiro yeayo akazara, akagadziriswa uye emhando yepamusoro mhinduro. Sezvo piyona achivhura epasirese 500W epamusoro-anoshanda ma module, Risen Energy ichapa ma module kushandisa G12 (210mm) monocrystalline silicon wafer kuna Tokai. Iwo ma module anokwanisa kudzikisira iyo balance-ye-system (BOS) mutengo ne9.6% uye mutengo wakayerwa wesimba (LCOE) ne6%, uku uchikura imwechete tambo inoburitswa ne30%.
Achitaura nezve kudyidzana, Tokai Boka CEO Dato 'Ir. Jimmy Lim Lai Ho akati: "Risen Energy irikutungamira indasitiri mukugamuchira nguva yePV 5.0 ine 500W yepamusoro-inoshanda ma module anotsamira pamatekinoroji ekucheka. "Tinofara kwazvo kupinda mukubatana uku neRisen Energy uye tinotarisira kuunzwa nekumisikidzwa kwemamojimendi nekukurumidza sezvinobvira nechinangwa chekuzadzikisa mutengo wakaderera wemagetsi uye nhanho yepamusoro yemari kubva pasimba rinogadzirwa."
Risen Energy global director wekushambadzira, Leon Chuang akati, “Tine rukudzo rukuru nekukwanisa kupa Tokai ma500W emhando yepamusoro ma module, ayo ane mikana yakawanda. Seye wekutanga mupi wepasi pe500W ma module, isu tinovimba uye tinokwanisa pakutungamira munguva yePV 5.0. Tichagara takazvipira kune nzira yeR & D yakanangana nemitengo yakaderera, zvigadzirwa zvine hunyanzvi pamwe nemhinduro dzinosangana nezvinodiwa mumusika. "Tinotarisirawo kubatana nevamwe vatinoshanda navo kuti vabatsire indasitiri yePV kugamuchira nguva nyowani yemamodule-akawanda akaburitswa."
Batanidza kubva https://en.risenenergy.com/index.php?c=show&id=576